Alaab-qeybiyeyaasha Soo-saarista Hore Hore ee Madaarka, Soo-saareyaasha, Dhoofiyeyaasha Bolise
Madoobaadka Horehound madow
[Magaca Latin] Marrubium vulgare Linn
[Qeybta Soo-saarista] geedo dhan
[Waxyaabaha firfircoon] I-menthol,
1. Ka ilaalinta shucaaca.
2.Kordhinta kacsanaanta iyo dhaqdhaqaaqa ilmo-galeenka.
3.Waxa loo isticmaalaa in lagu yareeyo boronkiitada iyo neefta neefta ku haysa.
4.Haysashada saamaynta hypoglycemic, oo ku habboon isticmaalka aadanaha ee sonkorowga.
5.Ka hortagga saameynta caabuqa caloosha, gaar ahaan wuxuu ku habboon yahay bukaanada ka soo kabanaya cabitaanka.
Ku saabsan Soosaarida Hore ee Hore
Black Horehound Extract waxaa loo isticmaalaa in lagu diyaariyo walxaha isku qurxinta ama dawooyinka, gaar ahaan halabuurka maqaarka, si kor loogu qaado midabaynta maqaarka, looga hortago ama dib loogu dhigo koritaanka timaha cawlka, daaweynta xanuunada astaamaha, yaraynta heerarka triglyceride ee unugyada baruurta, iyo ka hortagga dhisitaanka dufanka jirka sida cellulite. Halabuurka waxaa si gaar ah loogu isticmaali karaa si wax ku ool ah si kor loogu qaado midabaynta maqaarka ama midabaynta timaha iyo hoos u dhaca dhismaha dufanka jirka sida cellulite.